News - Uwe Microfiber kacha mma nke 2021
Nnukwu dayameta na-apụta nke na-ehichapụ mkpụrụ na-eri nri n'ime igwe ebe a na-agba ha ka obosara chọrọ. A na-etinye akwa na-enweghị akwa n'ime igwe mkpuchi ebe a na-etinye usoro mmiri mmiri site n'ọtụtụ ụzọ: na-agba ndị na-abụghị ndị a kpara akpa site na ngwugwu nke ihe ngwọta ahụ, na-agba mmiri na-agba mmiri na mmiri site na usoro nke nozzles ma ọ bụ na-agbanye n'ime ngwugwu nke apịaji. na-ehichapụ. Additiongbakwunye mmiri mmiri na-ehichapụ n'ụzọ na-enye ọbụna nkesa mmiri mmiri na-ehichapụ ya na-enye nchebe kachasị mma na ngwaahịa agwụla. Ọgwụ n'ime a apịaji mkpọ na-enye ndị kasị nta edo nkesa mgbe spraying mmanya si n'elu n'elu na-akpụ akpụ na-ehichapụ na-enye ndị kasị edo nkesa. Ọnụ ọgụgụ ihe ọ ofụ aụ na-aba n'anya na nhichapụ dịkwa oke mkpa maka ịdị irè ya na nha n'etiti mmanya na wipes dịgasị iche maka ngwa dị iche iche. Maka ihicha ebumnuche ma ọ bụ obere mmanya ma ọ bụ oke mmanya dị njọ. 12
Enwere ike idozi wipes dị iche iche n'ọtụtụ ụzọ, dabere na njedebe nke iji nhicha ahụ. Preferredzọ kachasị mma site na ichebe echiche bụ sachets onye ọ bụla. Ozugbo juru n'ọnụ enweghị ike iwebata microorganisms na enweghị mmiri mmiri. O di nwute na nke a bu uzo di oke onu ahia na nke adighi nma inye gi ihe nhichapu mmiri ma ya mere ha n'ozuzu ha. A na-ejikarị nhichapụ ụlọ na-abanye n'ime ngwugwu dị nro ma ọ bụ tubes na-adọta site na mkpuchi mgbe nwatakịrị na-ekpochapukarị na tubs na mkpuchi oghere maka nnweta dị mfe. Ndị na-ehicha ihu na-abụkarị na ngwugwu dị nro na obere oghere megharia. Onyonyo 2 na - egosiputa udiri ihe di iche. Ihe nkwakọ ngwaahịa dị iche iche na-emetụta Mbugharị nke mmiri mmiri na nhichapụ mmiri mana mmadụ niile ga-ekwe ka mpụga pụọ ​​na oghere. Maka ihichapụ akpọrọ na tubes, n'elu nhicha niile nwere ike ịnweta ihicha na ohere dị elu nke ịba ụba microbial, ebe yana tubs na ngwugwu dị nro nke nhicha kacha nso ga-adị mfe. Tubs nwere nnukwu oghere mepere emepe nke a na-emeghe emehe na-enye ohere dị ukwuu nke itinye mkpịsị aka ruru unyi na ụmụ irighiri ikuku site na ikuku karịa ịdọpụta site na tubes nwere ike ịchọ nchekwa ọzọ siri ike. O yikarịrị ka ha ga-enwe ike mejupụta ya na nhichapụ ọhụrụ ka nje ọ bụla nke microbial site na ibu gara aga nwere ike ịmalite ịmalite ịmalite na ndozi. Onyonyo 3a na - egosi nhicha mmiri nke na - aputa site na akpu ogwu nke gosiputara nke oma. Otú ọ dị imeghe ihe mgbochi (Fig 3b) na-ekpughe ìhè fungal na-eto eto n'elu mmiri a na-ehichapụ, ma mgbe a na-ewepụ mpịakọta site na mgbochi (Fig 3c) nnukwu fungal na-apụta ìhè. Mmiri a na-ekpochapụ na-egosi na 3a bụ nke akọrọ ma nwee ike ịkwado uto fungal, ebe nhichapụ ndị dị n'ime traga ahụ jigidere mmiri zuru oke maka fungi ka o too. Mgbe ewepụrụ ya na mkpochapu n'elu ahịhịa a na-ehichapụ ehicha karịa nke isi n'ihi na mmanya ahụ akwagala na ala nke ebe nchekwa ahụ. Mbugharị a mere ka nhicha ndị dị n'akụkụ elu nke ihe nchekwa ahụ nwere mmiri zuru oke maka uto fungal ma ezughi oke iji chekwaa ha mgbe nhichapụ ndị dị na ala nke akpa ahụ nwere ihe nchekwa zuru ezu iji kwụsị ero ahụ ka ọ na-eto.
Nlekọta nrụpụta nrụgide nke mgbochi mmiri
E nwere usoro ule dị iche iche eji eme ihe ugbu a, ha niile nwere echiche bụ isi nke ịgbakwunye microorganisms na ịlele maka nlanarị. Earlyzọ ndị mbụ na-anwale mmanya na-aba n'anya ma egosila na nke a ezighi ezi. 13 Dịka anyị tụlererịrị, mmekọrịta nke mmiri ahụ na wipes nwere ike imetụta nrụpụta nke usoro nchekwa ahụ, ma ọ bụ na-ehichapụ ihe oriri na-emetọ emetọ nwere ike belata ihe nchekwa ahụ na-akpata ọdịda ubi na ngwaahịa ebe mmanya na-egbu egbu gafere ule nrụgide nrụgide antimicrobial. Achọpụtakwara na ndị na-echekwa ihe nwere ike imekọrịta na nkwakọ ngwaahịa na-ebelata arụmọrụ ha. Testzọ nyocha ọhụụ na-adabere n'ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe dị iche iche dị iche iche na-ehichapụ ya ma na-echekwa ha n'okpuru ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka ogologo oge achọrọ. Mgbe ahụ, a na-agụkọta ihe ndị dị ndụ site na ịnakọta mmanya na-ekpochapụ ma na-eji usoro dị iche iche eme ihe microbial. Uzo nke inoculation di iche na otu usoro edeputara nke choro ichikota ihe ntule na membranes, kpoo ha ma tinye mpempe akwukwo ndi akpọnwu n'etiti uzo abuo na ngwugwu mbu. Ọ nwere ike ịbụ ọdịbendị dị ọcha, na-etinye ihe nyocha ọ bụla dị iche iche na mpempe ule dị iche, ma ọ bụ ngwakọta nke usoro nyocha a kapịrị ọnụ a gbakọrọ. Whichzọ a na-agbakwunye ihe ndị ahụ na mpempe ule na ọgwụgwọ iji hụ na nkesa nke nje ahụ nwere mmetụta dị ukwuu na nsonaazụ nnwale ahụ na nnwale nke nsonaazụ nnwale ahụ. Concentrationta na ụdị ihe dị ndụ dịkwa mkpa; ọnụ ọgụgụ dị ala dị ala nwere ike inye echiche ụgha nke nchekwa dị mma, ebe ịta ahụhụ gabigara ókè nwere ike ịchọ nnukwu nchekwa dị oke mkpa iji gafee ule ahụ. Iji esemokwu ule na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ nsogbu nwere nchekasị nwere ike inye nsonaazụ na-eduhie. A ghaghị imepụta usoro ule iji tinye inoculum na akụkụ kwesịrị ekwesị nke hichapụ ma hụ na mgbake dị mma nke ihe ndị dị ndụ. Usoro mgbake dị oke mkpa dị ka inoculation iji hụ na nsonaazụ ndị a rụpụtara na-anọchite anya ọnụọgụ nke ihe ndị dị ndụ na mpempe ule. Ọ dịkwa mkpa ịmepụta ụkpụrụ gafere dabere na mbelata ọnụọgụ ihe ndị na-adị ndụ mgbe oge akọwapụtara. Nhọrọ nke usoro ule kwesịrị ekwesị dị oke mkpa iji hụ na obi siri ike na nnwale sitere na laabu ga-anọchi anya ihe ga-eme n'ọhịa mgbe emepụtara ngwaahịa ma wepụta ya.
Wet ehichapụkwa ndị na-echekwa ihe, dabere na ngwa ha na nkwupụta ha, chọrọ iji zute usoro iwu dị iche iche. Enwere ike iji nhichapụ Wet maka ebumnuche na nkwupụta ọgwụgwọ, dịka sunscreens, ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ, dị ka ọgwụ disinfectants, nke nwere ike iweta ha n'okpuru njikwa usoro dabere na mba ha ga-ere na ya. ihe chọrọ nke ASEAN Cosmetics Directive ma ọ bụ EU Cosmetics Regulations ma ọ bụrụ na a ga-ebupụ ya na EU mba. Ndị nchekwa eji arụ ọrụ na ngwa ụlọ anaghị ejedebe na mgbochi ndị a. Ya mere, ihe dị iche iche nke ihe ndozi maka nhicha nhicha nke elu nwere ike ịdị iche na nhicha anụ ahụ ọ bụ ezie na ihe ize ndụ nwere ike ịdị ka onye na-ehichapụ ya. Mmetụta nke akara ụlọ akwụkwọ nwere ike ime ka ọnọdụ ahụ sie ike site na njirisi siri ike na-egbochi ojiji eji eji ihe eji eme ihe. Nke a anaghị ekwe omume ịnye ndụmọdụ maka ụwa maka nchekwa maka ngwa ndị ahịa ebe mmiri na-ehichapụ.
Ichekwa nhicha mmiri bụ nsogbu dị mgbagwoju anya n'ihi mmetụta nke nhichapụ na nkwakọ ngwaahịa na mmiri mmiri nke mmiri mmiri. A na-achọkarị ọtụtụ ihe eji eme ihe iji chebe nchebe dị ogologo oge megide nje na fungal. Maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwa ụlọ dị mfe iji usoro nchekwa ọdịnala dịka MCI / MI, MI / BIT ma jikọta ya na ndị na-enye onyinye na formaldehyde ka na-ejikwa ya. Achọpụtala ọgwụ methylisothiazolinone yana ihe nchekwa ndị ọzọ iji nye nchebe dị mma maka ọtụtụ nlekọta nlekọta onwe onye yana iji phenoxyethanol zuru ebe niile. Agagharị na ngwaahịa 'eke' na-eme nwayọ nwayọ karịa ngalaba nlekọta ndị ọzọ na ojiji nke phenoxyethanol yana njikọta nke acid nwere ike inye ezigbo nchekwa ọ bụrụhaala pH ziri ezi. Ihe mgbakwunye nke ihe na-eme ọtụtụ ihe, dị ka ihe emollients na humectants nke na-arụ ọrụ dị ka biocide boosters, na-eme ka nchekwa nke nhichapụ mmiri na-eme ka nkwụsi ike dị ogologo oge. A ka na-eji ọgwụ nchekwa dị ka parabens, IPBC na methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone mana enwere oke.
E gosipụtara ụdị nke akwụkwọ a na Australian Cosmetic Chemists Conference na Adelaide, 2012.